Walking Dead အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
35.0.3.100393 for Android
3.8 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（89.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Walking Dead: Road to Survival
လမ်းလျှောက်ထွက်နေသောလူသေများမှ Michonne, Rick နှင့်အခြားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများနှင့်အတူရပ်တည်ပါ။ လမ်းလျှောက်နေသောသေလွန်သူများကို Robert Kirkman မှသင့်ထံသို့ယူဆောင်လာသည့်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအမှောင်ဆုံးရန်သူများနှင့်အတူရပ်တည်ပါ ။
လမ်းလျှောက်နေသောစကြဝ universe ာကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ •ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင်လိုအပ်မည့်အခြည်မချွေတာသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထင်ဟပ်စေသောပုံပြင်များ။ •အသစ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ လမ်းလျှောက်နေသောရုပ်ပြမှမြေပုံများ။
ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အထူးစစ်ပွဲမဟာဗျူဟာနှင့်အတူအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သောစကြဝ universe ာဖြင့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ သင် Walkers နှင့်ကစားသမားများရောနှောနေသကဲ့သို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရေးနည်းဗျူဟာများ။
•စစ်တိုက်ခြင်းမဟာဗျူဟာကို အသုံးပြု. သင်၏လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်း MODAR MODE မှအရင်းအမြစ်များအတွက်အရင်းအမြစ်များအတွက်ရန်သူအုပ်စုများကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရန်သင်၏စစ်တိုက်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုပါ။
0 န်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ http://scopely.com/tos/
privacy ပေါ်လစီ - http://scopely.com/privasy/ california player များအတွက်ရရှိနိုင်သည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ,
Brute Force Day 1 Missions - The Walking Dead: Road to Survival TWD RTS
TWD RTS: Brute Force Event, How to get Brutus No. 2! Walking Dead: Road to Survival
TWD RTS: How to Get Brutus LB3! Full Event Guide - The Walking Dead: Road to Survival
Bullets + Bear Traps Ending - Weekly TWD RTS Stream - Walking Dead: Road to Survival
TWD RTS: Mythic Scotsman, Battle Pass 13 Character Reward! The Walking Dead: Road to Survival Leaks
Walking Dead: Road to Survival 35.0.3.100393
Walking Dead: Road to Survival 34.0.1.99884